Sales T-shirt masaf la Clickfunnel - Funnel Of The Day
Sales T-shirt masaf la Clickfunnel
Haddii aad raadinayso iibiyay T-Shirts la Clickfunnels aad u adeegsan kartaa template gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad kaliya in la sameeyo si sahlan.
Aasaasidda dukaanka for iibka t-shirt masaf la Clickfunnel run ahaantii waa wax fudud tan iyo software aad bixisaa page xilli furitaanka.
Waxaad sidoo kale laga tilmaami karo qurbaan waqti kooban ama tirec yaraanta ah oo ay la socdaan badhamada badan call-to-tallaabo kaalinta bogga ee hawlgelinta.
template ayaa sidoo kale waxay bixisaa badan oo qolka si aad u soo bandhigaan oo dhan faahfaahin ka mid ah t-shirts bixiyeen iyo sidoo kale gallery ah haddii aad leedahay wax ka badan hal model in ay bixiyaan.
Waxaa sidoo kale jira muuqaalada dheeraad ah si ay u dejiyaan page amar la amar optional garaac iyo sidoo kale in yar oo taariikh ah oo shirkadda.